FULANI NDỊ NCHỊ EHI, KWAPỤNỤ N’ỌHỊA NILE NỌ N’ALA-IGBO – ASETU – hoo!haa!!
Enugwu – Òtù Association of South East Town Unions(ASETU) agwala ndị Fulanis ndị nchị ehi nile bigasị n’ime ọhịa n’Ala-Igbo ka ha kwapụ ozigbo.
Òtù a kwuru na nkea bụ maka na ọ hịara ahụ ileru ndị bi n’ime ọhịa anya iji hụ na ha adaghị iwu. N’ihi nkea, ASETU kwuru ka ndi ọbụla bi n’ọhịa n’Ala-Igbo si n’ọhịa pụta, bịa chọrọ ụlọ biri ka ibe ha.
ASETU kwuru nkea n’ozi ha zigaara ndị nta akụkọ taa bụ ụbọchị Fraịdee nke Nnukwu Onyeisi ha, Ichie Emeka Diwe, Odeakwụkwọ Ukwu ha, Ichie Gidiọn Adikwuru nakwa ndị Isi ha steeti ise dị na Mpaghara Ọwụwa Anyanwụ Ndịda tinyere aka.
ASETU katọkwara etu ụmụ okorobịa ha siri ike, ndị ụfọdụ n’ime ha bụ ndị mba Niger siri ezobata n’Ala-Igbo nakwa akụkụ Ndịda uNaịjiriya ndị ọzọ n’agbanyeghị mmachi Gọọmenti Etiti machiri njem n’agbata Steeti na Steeti.
Òtù a kọwara na nke a gosiri na ọnọdụ a karịrị ndị Uwe Ojii nke mere ha ji atụpụta atụmatụ ka ndị nche ga-enyere ndị Uwe Ojii aka n’ịhụ na a kwụsịrị ndị a na-amịbata n’Ala-Igbo, ka ha ghara ibubatakwu ọrịa koro n’AlaIgbo ma ọ bụ bute ọgbaghara.
Ozi ahụ kwukwara sị, “Anyị na-akpọku obodo nile nọ n’Ala-Igbo ka ha kpọpụta ndị ahụ siri ike ga-eso ndị Uwe Ojii ruo ọrụ dịka ndị ” Civilian Joint Task Force (JTF) “
Previous Post: ÒTÙ SECOR, ENUGWU AMALITEWO IKESA MKPUCHI IHU N’EFU
Next Post: “E SI M N’ỤGBỌELU AHỤ NA-AGBA ỌKỤ MATUO” – ONYE LANARỊRỊNỤ NA MBEREDE ỤGBỌELU NA PAKISTAN